Maxaa la sameeyaa haddii aan lumiyo iPhone-kayga? | Wararka IPhone
Pablo Aparicio | | Amniga IPhone, Casharrada iyo buugaagta
Waxaa jira laba cabsi baahsan oo ay leeyihiin dhammaan milkiileyaasha taleefannada gacanta. Kii ugu horreeyay wuxuu ku dhowaad u gaar yahay waxa aan ugu yeeri karno taleefannada casriga ah shaashadiisa ballaaran darteed mana aha mid kale oo aan ka ahayn baqdin laga qabo in guddiga hore uu jabo. Walaaca labaad ee aan yeelan karno waa xaqiiqda ah in lumiso terminal Ama adoo ku illaaway meel, inay dhacday ama in nalaga xaday.
Tan iyo dhammaadkii 2010, dadka isticmaala aaladda Apple waxay heli karaan a qalab awood u yeelan kara helitaanka boosteejooyinkeena waxayna na siineysaa fursado taxane ah oo noo oggolaan doona inaan yareyno waxyeelada haddii ay dhacdo khasaaro ama xatooyo. Shaki la'aan, waa u qalantaa barashada qalliinka Raadi My iPhone iyo wax kasta oo ay na siiso.
Haddii aan lumnay iPhone-keena waxaan ka heli karnaa Raadi My iPhone labadaba qalab kale oo macruuf ah iyo shabakadda iCloud (kombiyuutarka. Kama noqon karto iPhone kale).
Casharkaan waxaan ku barayaa habka ka socda webka iCloud. Waxaad sidoo kale ka samayn kartaa qalab kale oo iOS ah haddii aad gasho barnaamijka Raadi My iPhone oo aad gasho Aqoonsigaaga Apple.
Tallaabada ugu horreysa waxay noqon doontaa helitaanka icloud.com oo xulo Find (my iPhone).
Shaashadda xigta waxaan ku arki doonnaa khariidad leh hal ama in ka badan oo dhibco cagaaran ah oo tilmaamaya booska qalabkeenna. Waa inaan gujino Dhamaan aaladaha ka dibna ku jira qalab lumay.
Markii aan gujino qalabkayaga waxaan arki doonnaa in inta hartay ee dhibcaha cagaaran ay baaba'aan, oo muujinaya kaliya xulashadeenna, isla markaana iPhonekeennu uu ka muuqanayo midigta kore.
Waxaan heli doonnaa 3 ikhtiyaar, oo mid walba door gooni ah leh:
Daree codka. Xulashadani way noo fiican tahay haddii aan waayno terminaalka, tusaale ahaan, fadhiga guriga, oo ay u badan tahay. Waxaan ku daadineynaa iPhone-gaaga kursiga fadhiga, wuxuu udhaxeeyaa dhabarka dambe iyo barkinta waana lumineynaa. Waan ognahay inaan ku haysanno guriga, laakiin maahan meesha. Waxaan gujineynaa Daree codka sidaasna ayaan ku heli karnaa. Qoraal wanaagsan, doorashadan way shaqaysaa xitaa haddii aan aamminka ku haysanno.
Qaabka (lumay). Doorashadan ayaa noo oggolaaneysa, sida magaceedu tilmaamayo, inaan dhigno terminal-ka qaab lumay oo haddii qof uu helo uusan adeegsan karin. Taasna kaliya maahan, doorashadan ayaa noo oggolaan doonta fariin ku qor lambarka taleefanka lagala xiriirayo si ay noogu yeeraan (wicitaanka, si macquul ah, annaga ayaa bixinay). Si tan loo sameeyo, waxaan raaci doonaa talaabooyinka soo socda:
Waxaan gujineynaa Mode (lumay)
Waxaan soo bandhigeynaa a lambarka xiriir taleefan oo guji Xiga.
Waxaan qornaa fariin oo guji aqbalaan.
Qofka helaya iPhone-geena, markuu isku dayayo inuu furo, wuxuu arki doonaa shaashadda madax ka ah soo gelintan.
Haddii ay taasi dhacdo in la keydiyo batteriga (in kastoo, laga soo bartay qibradeyda, muhiim maahan) waxaan heysanaa deegaanka naafada ah, markii qalab la gelinayo Habka lumay goobta ayaa la hawlgelin doonaa si loo helo iPhone-keena. Waqtigaas aan helno oo aan furaha dhigno inuu furo, deegaanka ayaa mar kale la jari doonaa.
Ugu dambeyntii waxaan leenahay ikhtiyaar "TirtirSi aad meel fog uga saarto waxyaabahaaga. Haddii aan hayno macluumaad gaar ah oo xasaasi ah oo aan dooneyno inaan sidaas yeelno, Waan masixi karnaa dhammaan waxyaabaha ku jira iPhone-ka oo waxaan uga tagi karnaa sidii ay uga timid warshadda. Waxaan tan ku gaari doonnaa laba guji oo keliya.
Daaqadda pop-up-ka, dhagsii markale
Ugu dambeyntii waxaan leenahay ikhtiyaarka ah quful noo iPhone by IMEI. Tan waxaan kaliya ku qasbanaan doonnaa soo wac hawl wadeenadeena oo noo keen IMEI iyaga inay naga fogeeyaan meel fog. Qufulkani waa wax, qufulka iCloud, aanan isticmaali karin. Ka joojinta IMEI waa wax aad u fudud, laakiin way adag tahay in la furo haddii aan dib u soo ceshanno terminaalka. Laakiin waxaa jira suuro gal in aanan dooneynin inaan qatar galino oo xanibaadan ayaa lagama maarmaan ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Amniga IPhone » Maxaa la sameeyaa haddii aan lumiyo iPhone-kayga?
Waad salaaman tahay, waxaan jeclaan lahaa in qof ii sharaxo sida loogu xiro iphone-kayga 6-aad qalabka dhegaha la geliyo ee loo yaqaan 'bluetooth', waxaan soo iibsaday caqli badan mana haysto wado aan kula xiriiro iphone-kayga. Mahadsanid.
Jawaab Jorge Cruz
Waxaan muddo dheer ka lumay kalsoonida aadanaha ee helaya taleefannada gacanta iyo boorsooyinkooda ...
maxaa dhacaya haddii aan gps naafo noqdo? sinaba looma arko khariidada? Hagaag, kaliya waan dhaqaajiyaa markaan doonayo inaan u isticmaalo ... tan badbaadinta batteriga.
Waxaan haystaa GPS-ka had iyo jeer firfircooni mana arko dhibic batteriga ku jirta. IPhone wuxuu kicin doonaa oo keliya GPS-ka marka codsi u baahdo. Waqtiga intiisa badan waxay ahaan doontaa adiga oo aan wax cunin xitaa haddii aad firfircooni geliso. Ma aqaano inaad i fahantay iyo in kale. Isku day inaad dhaqaajiso dhowr maalmood waxaadna arki doontaa in batteriga uusan ka xanuunsanayn. Haddii GPS-ga la gooyey, ku dhejinta qaab luminta ayaa dhaqaajineysa GPS-ka. Sida ugu dhakhsaha badan ee aad u hesho oo aad u furto iPhone, GPS ayaa mar kale laga jaray
Haddii sidoo kale laga raadin karo iphone kale, waa inaad kaliya u bedeshaa idloud ic id kaaga oo aad raadisaa. Waxaan isku dayay marar badan.
Haa, laakiin waxaan ula jeedaa inaan laga qaban karin iCloud.com
midkoodna tani ma shaqeyso maxaa yeelay waxaa jira dad bixiya adeegga si looga saaro caymiska iCloud
Ku jawaab benybarba
hello oo haddii qof helo oo uu damiyo, sidee baaritaanka loo hawl geliyaa?
Ku jawaab leonardo
Waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad dirto booska ugu dambeeya: https://www.actualidadiphone.com/como-saber-la-ultima-localizacion-de-tu-iphone-incluso-si-se-queda-sin-bateria/
Waan necbahay batarigeeda xx igama dhamaaneyso waxaan iibsaday todobaad kahor
Ku jawaab Viiviana Angela'h Galarza
Maqaalku waa wanaagsan yahay. Had iyo jeer way wanaagsan tahay in la cusbooneysiiyo mowduucyadan
Waxaan lumiyay iPhone-kayga laba maalmood markii aan iskudayay inaan helo, wuxuu ii sheegay inaan wax xiriir ah lahayn.